Umsabalalisi Wamanzi we-Cylinderless → Izitsha zokuhambisa amanzi ezigcwala ePoland
Iyadingeka nguwe isitsha samanzi enkampanini, ehhovisi? I-Water Point njengommeleli kuphela Isimonyo ePoland kunikezwa abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela okusetshenziselwa i- indawo yokudlela, amahhotela, ihhovisi, amahhovisi, imitholampilo kanye nezibhedlela, izikole, amapaki nezindawo zemidlalo, ukuqina kokuqina futhi domu.
I-cosmetal namuhla ingumkhiqizi omkhulu wase-Italy nomholi wamazwe omhlaba ekukhiqizeni kwezisombululo ezintsha zamanzi okuphuza.
Ukukhiqizwa kwesiqandisi, kokubili emabhodleleni nasemanzini, kwenziwa ku-100% e-Italy.
I-cosmetal ingaziqhayisa ngesinye sokunikezwa okubanzi embonini, zombili ngokuya ngezinhlobo zemikhiqizo efikisiwe amanzi - Izinga lokushisa lasekamelweni, amakhaza, okushisa, okukhazimulayo - kanye namamodeli ahlukahlukene atholakalayo.
Ukuzibophezela kwamazwe omhlaba, kanye nekhwalithi yemikhiqizo yayo, kuvumele le nkampani yezobuciko ukuba ifinyelele ezingeni lobuciko futhi ibe ngumhlinzeki kwamanye amaqembu abaluleke kakhulu wokuthenga, e-Italiya nasemhlabeni wonke, lapho kudalelwa khona amacebo wokwenza ngokwezifiso.
Landa ikhathalogi >>
I-Hi-Class iyisitsha sokuhlanza amanzi esisezingeni eliphezuluy, yakhelwe futhi ihloselwe zonke izinhlelo zokusebenza nezangaphakathi. Isebenzisa izixazululo zakamuva zobuchwepheshe kanye nezinto zokwakha ezisezingeni eliphezulu eziqinisekisa ukusebenza kahle nokuthembeka, kukuvumela ukuthi ufike ku-45 l / h wamanzi abandayo futhi akhazimulayo no-13 l / h wamanzi ashisayo.
Inikeza izinhlobo ezine zamanzi: izinga lokushisa lasekamelweni, ukubanda, ukucwazimula nokushisayo, okungathelwa emikhunjini yezindawo eziphakeme ngokubonga ngesipuni esingenakuguqulwa. Ifomu lesimanje; umphambili wenziwe ngengilazi yesibuko esimnyama uhlanganiswe nensimbi engenasici nephaneli yokulawula yobuhle, udala umkhiqizo onamanani aphezulu kakhulu wokusebenzisa.
Isisabalalisi samanzi samahhala se-Pro-Stream silyl. Amanzi abandayo, atshisayo nawobisi
I-PRO-STREAM iyinhlangano yokudlala ngomklamo wanamuhla futhi oyindidane onekholomu efakwe ngokushisayo, iphaneli yokuthinta okulawula, enikeza ngokusobala ngesimo sokusebenza sedivaysi, kufaka phakathi imisebenzi: ukulungele, ukufudumeza, ukuvala. Isebenza ngokuhlukahluka nge-boiler, isiqandisi nohlelo lwe-gassing.
Uhlelo luphinde lube nohlelo olubucayi olulawula imodi yokusebenza kwensiza, yehlise ukusetshenziswa kwamandla kagesi ngokuzenzakalelayo. Ikhipha amanzi ashisayo ngeqondo lokushisa lika-98 ° C ukusuka esikhathini sokushintshwa, ukukwazi ukugcwalisa izinkomishi ezingama-215 ngehora ngomthamo ongama-250 ml, kanye nenketho yamanzi abandayo futhi akhanyekayo afinyelela ku-15 l / h. Ingasetshenziselwa ukwenza itiye, ikhofi nezinye iziphuzo ezishisayo ngendlela esheshayo nengokoqobo.
Isizinda sokuhambisa amanzi
Ukuzilolonga - Isiphuzo samanzi samahhala esylinda: esebenza kahle, eqinile, ngokubukeka kwesimanje, enziwe ngezinto ezinhle kakhulu eziqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokuqina. Izisombululo ezisetshenzisiwe kwezobuchwepheshe nezobuchwepheshe ziqinisekisa ukusebenza okulula nokuphephile, okuthinta kakhulu izindleko zokusebenza ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
Amanzi opholile we-Aquality coestr ahlinzeka ngama-22 l / h wamanzi abolile futhi angcolile, anele abantu abangama-40.
I-Aquality isebenzisa ubuchwepheshe be-ICE Bank kulokhu kuphola kwamanzi, okuxhumeke ngqo ekunikezelweni kwamanzi.
Akukho ndawo yokugcina eyakhelwe ngaphakathi, enikeza izinga eliphakeme lokuvikelwa kwenhlanzeko njengoba amanzi angagciniwe ngezimpelasonto nangamaholide.
Amanzi apholile okugcina amanzi agcina indawo yokubeka. Idizayini eyenziwe ngesitayela ukuze ivumelane nanoma iyiphi imvelo.
I-Aquality inesikhala esikhulu sokusabalalisa esikuvumela ukuthi ugcwalise izimbiza namabhodlela.
Iphelele njengohlelo lwamanzi wasekhaya noma njengendawo epholisa amanzi ehhovisi
Umphathi wendebe ehlanganisiwe (izinkomishi ezi-7)
Ngaphandle kwethangi lesitoreji / Ukupholisa okuqondile
Ukuhlinzekwa okungapheli kwamanzi asanda kuhlungwa
Izimo zokuhlanzeka okulula ukusula
Okubandayo kwamanzi abandayo
Iwaranti yonyaka o-1
Izinhlobo ezitholakalayo: Igumbi lokushisa lamanzi, kubanda, kuyashisa, kukhanye.
Isigciseli samanzi samahhala se-j-Class silinda
Izitsha zamanzi zeJ-Class zihambisana nekhwalithi ephezulu kakhulu nobuchwepheshe obuhle kakhulu, obenza ukuba babe yithuluzi elithembekile ezandleni zabasebenzisi, ngenxa yokuguquguquka kwezinto zalo, lisetshenziswa emahhovisi, imigoqo, izindawo zokudlela ezincane kanye nasemakhaya.
Zivela ezahlukahlukene ezimbili: I-TOP ku-counter ne-IN ngaphansi kwe-counter, isabalalisa izinhlobo ezine zamanzi: izinga lokushisa lamakamelo, amanzi abandayo, amanzi ashisayo ku-98 ° C namanzi e-carbonated, anamandla amabili ama-30 l / h no-45 l / h.
I-Niagara Falls - abahambisa amanzi kusuka kulo mndeni kukhona amadivaysi ahlala isikhathi eside futhi athembekileko athatha indawo yamanzi asemabhodleleni, asebenze ngokusebenza, aqede isidingo sokuhlolwa nokugcinwa, asindise isikhathi futhi enze kube lula ukwenza izinto, futhi anikele ngamazinga aphakeme kanye nokusebenza kahle.
Ngakho-ke, zenzelwe izinhlelo zokusebenza ezinkulu, eziqinisekisa ukusebenza ngaphandle kwenkinga lapho kusatshalaliswa inani elikhulu lamanzi anekhabhoni futhi angenawo ikhabhoni, okukuvumela ukuthi ugcwalise cishe zonke izinhlobo zemikhumbi ngokushesha futhi unciphise izindleko. Kunamamodeli amathathu: i-countertop ephezulu, IN ngaphansi kwe-counter and freestanding.
Iphelele ekunikezeni amanzi amaningi abandayo, asekhona futhi akhazimulayo. Ihambelana kahle nomkhakha wokudla: imigoqo, izindawo zokudlela, amahhotela kanye nama-canteens. Isisabalalisi singaxhunyaniswa kunoma yiluphi uhlelo lwe-under-counter ukufeza noma yisiphi isidingo sokuhambisa. Ukusebenziseka kalula kanye nokukhethwa kwezinto ezisezingeni eliphakeme kuqinisekisa inhlanzeko ephezulu futhi ngasikhathi sinye kunciphise isidingo sokulungiswa okungajwayelekile.
Isisabalalisi samanzi se-H2O sama-silinda
I-H2O siyisitsha samanzi Ubukhulu obunamakhompiyutha, ukwakheka kwanamuhla, ukusebenza okulula nokunembile, ngokuba ngumthombo omuhle kakhulu wamanzi amnandi emazingeni okushisa asekamelweni, kubanda, kukhanye futhi kuyashisa.
Iza ngezinguqulo ezimbili: I-TOP countertop ne-IN ngaphansi kwe-countertop ene-spout.
Isigcini se-G ZERO sama-cylinder-samahhala samanzi
Isikhiphedi esenziwe ngembobo ye-Chrome ngesembozo sensimbi esimnyama noma esiminyene.
Isitsha sokuhambisa amanzi samahhala se-Acqua Alma Point - Isipiliyoni esisha esijwayelekile sokuvikela umhlaba wethu ukuvikela umhlaba wethu
I-Acqua Alma Point iyisichaseli esihlanzekile esingakhipha noma yiluphi uhlobo lwamanzi, sikufakazele ngokwanele ukwenza iziphuzo ezingokwezifiso, kepha iningi labo lisebenzisana kakhulu nomsebenzisi nge-Acqua Alma Refill APP nebhodlela elihlakaniphile elinomaki we-NFC. Ngenxa yesicelo, umsebenzisi angaphatha amaphrofayli, izintandokazi, izindlela zokupheka, njalo ahlole izinga le-hydration futhi athole iphuzu eliseduze le-Acqua Alma. Yize sibonga i-NFC, leli bhodlela lihlotshaniswa nephrofayili yomsebenzisi futhi lamukelwa ngumshini, likhumbula izintandokazi noma amaphromoshini asebenze kuphrofayela.
5 / 5 ( 64 amavoti )
Iphuzu le-Acqua Almaabahambisa amanzi ngaphandle kwesilindaisisulu samanzi esidonsa ngaphandle kwesilindaibhodlela lamanzi kwi-dispenserisitsha samanzi sasekhayaukuhanjiswa kwamanzi ehhovisiukuhanjiswa kwamanzi entwasahlobo endliniabahlinzeka ngamanzi ezinkampaniniukusatshalaliswa kwamanzi ezinkampaniniukusatshalaliswa kwamanzi amamineraliisitsha samanziisitsha samanzi sezinganeisabalalisa samanzi akhanyekayoisitsha esikhulu samanzi macroisitsha sokuhambisa amanzi iWarsawisitsha sokuhambisa amanzi ashisayoisitsha samanziisitsha samanzi5l isitsha samanziisitsha samanzi esingenabhodlelaisilinda sokuhambisa amanziintengo yokuhambisa amanziisitsha semvelo sokuhambisa amanziisitsha samanzi sezinganeisitsha samanzi sehhovisiisitsha samanzi sasekhayaintengo yokusabalalisa amanzi yasekhayaukubuyekezwa kokuhambisa amanzi wasekhayaisitsha samanzi senkampaniisitsha sokuphuza amanzieden isitsha samanziisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonatedisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonated sekhayaeden isitsha esikhanyayo samanziokhipha amanzi ukuthi isebenza kanjaniisimbiwa samanzi amamineraliisitsha samanzi samabhodlelaisitsha sokuphuza amanziisitsha samanzi esiqandisiniisitsha samanzi esiqandisini ukuthi sisebenza kanjaniisitsha sokuhambisa amanzi iWarsawindawo yokuqasha amanziintengo yokuqasha amanziisitsha sokuhambisa amanzi se-co2isipompo sokuhambisa amanziisitsha samanzi esiqandayoisitsha samanzi abandayoabahambisa amanzi ezinkampanini kanye namahhovisiabahambisa amanziabahambisa amanzi ezinkampaniniizitsha zamanzi zehhovisiizitsha zamanzi zasekhayaabahambisa amanziizitsha zamanzi ezikhazimulayoiziphuzo zamanzi okuphuzaizitsha zamanzi entwasahloboabahambisa amanziIsitsha esisodwa samanziumthombo wamanzi wokuphuzaisitsha sokuhambisa amanzi esiqandisiniAmanziamanzi amahhovisiamanzi wehhovisiamanzi ohla lwamanani entengo yehhovisiisitsha samanzi sasekhayaabahambisa amanziumsabalalisi wamanzi amamineraliamanzi kwizitsha zezinkampaniamanzi avela ku-dispenseramanzi avela kusabalalisa ezinkampaniniamanzi avela kwi-dispenser aya endliniamanzi kusuka kuzibuyekezo ze-dispenseramanzi nge-dispenseramanzi entwasahlobo ngokulethwa ekhaya